MAAD: Cesc Fabregas Oo Kaftan Ka Sameeyay Caydhinta Julen Lopetegui, Wenger Oo Maada Qayb Ka Noqday ,Gary Lineker Iyo Dadka Markiiba Baraha Bulshada Kaga Hadlay Xaalada Xulka Spain. – GOOL24.NET
MAAD: Cesc Fabregas Oo Kaftan Ka Sameeyay Caydhinta Julen Lopetegui, Wenger Oo Maada Qayb Ka Noqday ,Gary Lineker Iyo Dadka Markiiba Baraha Bulshada Kaga Hadlay Xaalada Xulka Spain.
June 13, 2018 Mahamoud Batalaale
Jamaahiirta kubbada cagta aduunka ayay lama filaan ku noqotay waxa ka socda xulka qaranka Spain iyada oo saacado ka hor waqtiga uu koobka aduunku bilaamayo uu xidhiidhka kubbada cagta Spain ku dhawaaqay in ay shaqadii ka caydhiyeen tababare Julen Lopetegui kaas oo isla saacado ka hor loo magacaabay macalinka cusub ee Real Madrid.
Khabiiro, ciyaartoy iyo waliba jamaahiir kubbada cagta ah oo aan tiro lahayn ayaa markiiba baraha bulshada ku soo bandhigay dareenkooda iyo qaabka ay ula yaabeen in Julen Lopetegui shaqada xulka qaranka Spain laga joojiyay saacado ka hor kulanka ay La Roja la ciyaari doonto Portugal.
Haddaba iyada oo ayna suurtogal ahayn in la soo koobi karo dadka sida aan kala joogsiga lahayn fikradahooda uga dhiibanaya caydhinta Julen Lopetegui ee xulka qaranka Spain waxaanu soo qaadanaynaa qaar ka mid ah dadka caanka ah ee arintan ka hadlay iyada oo waliba qaar ay si maad ah uga hadleen.
Xidiga xulka qaranka Spain iyo kooxda Chelsea ee Cesc Fabregas ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda uu ka tagay tababaraha shaqada laga caydhiyay ee Julen Lopetegui wuxuuna u balansan yahay in uu markii ugu horaysay noqdo khabiir kubbada cagta ka faalooda oo TV soo fadhiista balse markiiba waxa uu Julen Lopetegui ka sameeyay maad.
Barnaamij soo saaraha BBC ee Gary Lineker ayaa markii shaqada laga caydhiyay Julen Lopetegui waxa uu sheegay in Fabregas uu war ka heli doono sharaxaada arintan maadaama oo uu markii ugu horaysay soo fadhiisanayo TV wuxuuna soo qray Lineker: ” Ah wau fiican tahay, waxay tani wax uu ka hadlo siinaysaa Fabregas ee bilawgiisa khabiirnimada”.
Laakiin Cesc Fabregas oo aan wax wanaag ah u hayn Julen Lopetegui ayaa qaab maad ah uga soo jawaabay hadalka Gary Lineker wuxuuna sheegay in hadda uu filan karo in xataa xulka qaranka Spain looga yeedho si uu koobka aduunka u ciyaari karo wuxuuna yidhi: ” Sug, laga yaabee in hadda la iiga yeedho (xulka Spain)”.
Journalistaha ahna taageeraha wayn ee kooxda Arsenal ee Piers Morgan ayaa shaqo ka caydhinta Julen Lopetegui ugu maadsaday macalinkii hore ee kooxdiisa ee Arsene Wenger wuxuuna sheegay in haddii si deg deg ah loo shaqaalaysiiyo Wenger oo uu koobka aduunka ku guulaysto ay noqon doonto wax maad ah.
Piers Morgan ayaa soo qoray: “Qiyaaso haddii Wenger hadda si deg deg ah loogu shaqaalaysiiyo tababaraha Spain…. oo uu koobka aduuka ku guulaysto, hadda waxay noqon kartaa wax lagu qoslo”.
Taageere kale oo ku maadsadanaya Spain ayaa soo qoray shuruudaha ay tahay in looga baahan yahay tababaraha cusub ee xulka qaranka Spain wuxuuna soo qoray: ” Waa in uu diyaar u yahay in uu safro, in uu haysto baasaaboor sharci ah, in uu ku hadli karo Spanishka, waa in uu diyaar u yahay in uu isla markiiba shaqada bilaabo”.
Jide Samuel Adigun ayaa saddex xaaladood arinta ku soo koobay wuxuuna soo qoray: ” Talaadadii: Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in Julen Lopetegue uu yahay tababarahooda cusub. Arbacadii: Spain waxay shaqadii ka caydhisay Julen Lopetegui. Koobkii aduunka ee Spain waxa uu soo dhamaanayaa inta aanu xataa bilaaminba”.
Xulka qaranka Spain oo ka mid ahaa kuwa sida wayn loogu saadaalinayay koobka aduunka ayaa hadda ku jira xaalad jaho wareer ah waxaana jirta dhibaato kale oo ah khilaaf ciyaartoyda dhexdeeda ah maadaama oo uu kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos markiiba taageeray in Julen Lopetegui uu qarankiisa sii joogo.
Falcelinta twitterka iyo baraha bulshada ee jamaahiirta kubbada cagta ayaa noqotay mid waali ah oo muujinaysa sida ay kubbada cagta wax walba si deg deg ah iskugu badali karaan, waxayna hadda jamaahiirta Spain sugayaan sida ay xaaladu noqon doonto.